ခံစစ်အမှားကြောင့် စင်ကာပူကိုဂိုးပြတ်ရှုံးခဲ့တာလို့ မြန်မာနည်းပြပြော
အာဆီယံ ဆူဇူကီးဖလားပြိုင်ပွဲ အုပ်စုအဆင့် ပွဲစဉ်မှာ မြန်မာဘောလုံးအသင်းအနေနဲ့ ခံစစ်ပိုင်း အမှားတွေကြောင့် အိမ်ရှင်စင်ကာပူအသင်းကို ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာနည်းပြချုပ် အန်တွမ်နီဟေးက ပွဲအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။….
“ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ပြီးကတည်းက မြန်မာလိဂ် မရှိတော့တဲ့အတွက် အသင်း ကစားသမားတွေ အနေနဲ့ အသင်းလိုက် ချိတ်ဆက်မှု ပြတ်နေပါတယ်။ ဒီလို အချိတ်အဆက် ပြတ်တဲ့အတွက် ပထမပိုင်းမှာ အသင်းကို နစ်နာစေခဲ့ပါတယ်။…
စင်ကာပူရဲ့ ထောင့်ကန်ဘောတွေကို ကာကွယ်နိုင်မှုလည်း အားနည်းခဲ့တယ်။ ခံစစ်ပိုင်း အမှားတွေကြောင့် အဖွင့်ပွဲမှာ အမှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ် “ ဟု အန်တွမ်နီဟေးက ပွဲအပြီးမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။…
ယနေ့ညပိုင်းက စင်ကာပူအမျိုးသားအားကစားကွင်းမှာ စင်ကာပူအသင်းနဲ့ မြန်မာအသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာမှာတော့ အိမ်ရှင် စင်ကာပူက မြန်မာအသင်းကို တိုက်စစ်မှူး ဖန်တီ၊ ဘဟာရူဒင်တို့ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေနဲ့ သုံးဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။…
အာဆီယံ ဆူဇူကီးဖလားၿပိဳင္ပြဲ အုပ္စုအဆင့္ ပြဲစဥ္မွာ ျမန္မာေဘာလုံးအသင္းအေနနဲ႕ ခံစစ္ပိုင္း အမွားေတြေၾကာင့္ အိမ္ရွင္စင္ကာပူအသင္းကို ဂိုးျပတ္ရႈံးနိမ့္ခဲ့ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာနည္းျပခ်ဳပ္ အန္တြမ္နီေဟးက ပြဲအၿပီးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။….
“ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ေအာက္တိုဘာ ၿပီးကတည္းက ျမန္မာလိဂ္ မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ အသင္း ကစားသမားေတြ အေနနဲ႕ အသင္းလိုက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျပတ္ေနပါတယ္။ ဒီလို အခ်ိတ္အဆက္ ျပတ္တဲ့အတြက္ ပထမပိုင္းမွာ အသင္းကို နစ္နာေစခဲ့ပါတယ္။…
စင္ကာပူရဲ႕ ေထာင့္ကန္ေဘာေတြကို ကာကြယ္နိုင္မႈလည္း အားနည္းခဲ့တယ္။ ခံစစ္ပိုင္း အမွားေတြေၾကာင့္ အဖြင့္ပြဲမွာ အမွတ္ဆုံးရႈံးခဲ့ရပါတယ္ “ ဟု အန္တြမ္နီေဟးက ပြဲအၿပီးမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။…
ယေန႕ညပိုင္းက စင္ကာပူအမ်ိဳးသားအားကစားကြင္းမွာ စင္ကာပူအသင္းနဲ႕ ျမန္မာအသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာမွာေတာ့ အိမ္ရွင္ စင္ကာပူက ျမန္မာအသင္းကို တိုက္စစ္မႉး ဖန္တီ၊ ဘဟာ႐ူဒင္တို႔ရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြနဲ႕ သုံးဂိုးျပတ္အနိုင္ရခဲ့ပါတယ္။…
Previous Article Social Media App တွေသုံးချိန်မှာ Mobile Data သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ၊Data တွေဈေးတက်တော့မဲ့အချိန်မှာ သိထားသင့်တယ်နော်
Next Article အေမရီကန္က B-61-12 န်ဴးကလီးယားဗုံး ၅၀၀နီးပါး ထုတ္လုပ္သြားမည္ဟုဆို